Ciidamada Jubbaland oo gurmad ahaan ugu socda Beledxaawo oo ka gudbay Mandhera - Jowhar Somali news Leader
Home News Ciidamada Jubbaland oo gurmad ahaan ugu socda Beledxaawo oo ka gudbay Mandhera
Ciidamada Jubbaland oo gurmad ahaan ugu socda Beledxaawo oo ka gudbay Mandhera
Ciidamo ka tirsan Jubbaland oo ku hubeysan gaadiidka dagaalka ayaa saacadihii la soo dhaafay ka gudbay deegaano ka tirsan gudaha Kenya, iyaga oo ku sii jeeda Beledxaawo oo maalmo ka hor ay dagaalo culus ka dhaceen.
Sida wararku sheegayaan Ciidamadan Jubbaland ka tirsan oo ka yimid dhanka degmada Ceelwaaq ayaa gudaha u galay Kenya iyagoo ka gudbay xadka, waxaana qorshaha ciidamadan uu ahaa inay dhanka Mandhera ka weeraraan degmada Beledxaawo.
Sawirro iyo muuqaal la soo geliyay baraha bulshada ayaa muujinayay tobaneeyo gaadiidka dagaalka iyo ciidamo fara badan oo ka soo gudbaya tuulada wargaduud oo u dhaxeysa Mandhera iyo Ceelwaaq Soomaaliya.
Guddoomiyaha Gobolka Mandhera Cali Roba ayaa isna xaqiijiyay in Ciidamadan ka tirsan Jubbaland ay gudaha Mandhera, iyagoo soo maray wadada Buula Jamhuuriya, waxaa uu sheegay inay tani khatar weyn ku tahay dadka Kenyanka ee ku nool Mandhera, waxaana uu ugu baaqay dowladda Kenya inay yareyso dhaq dhaqaaqyadan xawaaraha ku socda keeni kara halista ku ah nolosha dad badan.
2-dii bishan ayay aheyd markii dagaalo culus oo ka dhacay Beledxaawo uu dhex maray Ciidamo ka tirsan dowladda Federaalka iyo Ciidamada Jubbaland ee uu hoggaaminayo Wasiirkii Amniga Jubbaland ee baxsadka ah C/rashiid Janan.